China ထုံးကျောက်မီးသွေးကျောက်မီးသွေးကြိတ်ခွဲစက်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | တက်
ကျောက်မီးသွေးအတွက်တူရိယာခွဲစက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်သောသံတူကိုယ်ထည်နှင့်ပစ္စည်းတိုက်မိသည့်မျက်နှာပြင်များမှပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲစေသောပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးအတွက်တူရိယာခွဲစက်သည်ကျောက်မီးသွေး၊ ဆား၊ ဂျိုက်စ်၊ အနိမ့်၊ အုတ်၊ အုတ်၊
ကျောက်မီးသွေးအတွက်ရိုက်နှက်သောသံတူသည်အရှိန်မြင့်လှည့်သောသံတူကိုယ်ထည်နှင့်ပစ္စည်းတိုက်မိခြင်းမျက်နှာပြင်အားဖြင့်ပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးအတွက်တူရိယာခွဲစက်သည်ကျောက်မီးသွေး၊ ဆား၊ gypsum, alum, အုတ်၊ tile၊ ထုံးကျောက်စသည်တို့ကဲ့သို့သောကျိုးပဲ့လွယ်သောတွင်းထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကြိတ်ခွဲရန်သင့်လျော်သည်။
Hammer Crusher ၏အခြေခံမူ
တူရိယာခွဲစက်သို့မဟုတ်တူသောကြိတ်ခွဲစက်သည်အလုပ်လုပ်သောအခါမော်တာသည်မြန်နှုန်းကိုလည်ပတ်ရန်လှည့်ရန်စက်ကိုမောင်းနှင်သည်၊ ပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည့်အခေါင်းပေါက်ထဲသို့အညီအမျှကျွေးမွေးသည်၊ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်လုံးဝကြိတ်ခွဲသည်အထိအမြန်နှုန်းမြင့်လည်သောသံတူဖြင့်ရိုက်ခတ်ခြင်းခံရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြေထုဆွဲအားများသည်ဆွဲအားနှင့်ဘားများပေါ်တွင်ဘားများကိုတွန်းလှန်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သောအမှုန်အရွယ်အစားရှိသောပစ္စည်းများသည်ဆန်ခါပြားကိုဖြတ်သွားလိမ့်မည်။ အမှုန်အရွယ်အစားကြီးသောသူများသည်ပန်းကန်ပေါ်တွင်ရပ်တန့်သွားပြီး၎င်းတို့ကိုလိုအပ်သောအမှုန်အရွယ်အစား၊ နောက်ဆုံးတွင်ကြေမွသောပစ္စည်းများသို့ဖိအားမပေးမချင်းသံတူ၏သက်ရောက်မှုကိုခံရလိမ့်မည်။ ဆန်ခါပြားမှတဆင့်တူကြိတ်ခွဲကနေဆေးရုံကဆင်းလိမ့်မည်။
Hammer Crusher Mill ၏အားသာချက်
1. သံတူ၏ ဦး ခေါင်းကိုနည်းပညာအသစ်ဖြင့်ပုံသွင်းသည်။
၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်း၊ အမှုန်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊
4. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ၀ တ်ဆင်မှုနည်းပါးပြီးလွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
PC300 × 200 ≤100 ≤10 ၂-၅ ၅.၅ 600
PC400 × 300 ≤100 ≤10 ၅-၁၀ 11 800
PC600 × 400 20120 ≤15 ၁၀-၂၅ ၁၈.၅ 1500
PC800 × 600 20120 ≤15 20-35 55 3100
PC1000 × 800 ≤200 ≤13 ၂၀-၄၀ 115 7900
1000 ×× PC1000 ≤200 ≤15 30-80 132 8650
PC1300 × 1200 50250 ≤19 80-200 240 13600
ရှေ့သို့ ချောမွေ့။ အံသွားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲစက်
ကျောက်ခေတ်ကျောက်တုံး Crusher အပိုပစ္စည်းများ Jaw Plate
ထုံးကျောက်ကျောက် Horizontal ရိုးသဲ Making Cru ...